UMolly, Intlanzi | Ngeentlanzi
Inzululwazi ibizwa I-Poecilia Sphenops, le ntlanzi eyaziwa ngokuba nguMolly, yeyosapho lwasePoeciliidae, oluhlala kwindawo yaseMexico naseMelika. Ngokubanzi olu hlobo ludla ngokuhlala ngokwamaqela, ngesiqhelo kumanzi abalekayo ahamba rhoqo.
Ezi intlanzi molly, bane-dimorphism yesondo, oko kukuthi, abantu basetyhini bakhulu kakhulu kunamadoda, abalinganiswa phakathi kwe-7 kunye ne-11 yeesentimitha, ngelixa indoda enguMolly ingafikeleli kangangeesentimitha ezi-5 ubude. Kwangokunjalo, umva wokubhabha kwentlanzi eyindoda kuphuculwe ngakumbi kunoko kwabasetyhini kunye ne-anal fin yayo iye yaba lilungu layo lokuzala.
Le minnows iphawuleka ngokwahlukahlukana kwemibala, ngokuxhomekeke kuhlobo, imvelaphi kunye nesini. Olunye uhlobo oluqhelekileyo lwezi zilwanyana yile imelanicOko kukuthi, zimnyama ngokupheleleyo. Nangona intle kwaye ibukeka ngendlela eyahlukileyo, inovakalelo kwaye ibuthathaka kunabanye, kwaye ifuna ukhathalelo ngakumbi kuba bathambekele kwizifo ezithile.
Ukuba ucinga ukuba nesinye sezi zilwanyana kwi-aquarium yakho, kuya kufuneka uyazi ukuba i-aquarium akufuneki ibe nezinto zokuhombisa okanye izityalo eziqukethe iinkuni, kuba oku kwenza pH yamanzi Iwela ngaphantsi kwe-7, eya kuba yingozi kwaye ibe yingozi kwizilwanyana. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kwi-aquarium egcina ezi zilwanyana, kufuneka ubeke izityalo ezinokumelana nobukho betyuwa emanzini. Kwangokunjalo, kubaluleke kakhulu ukuba ugcine engqondweni ukuba ubushushu bamanzi echibini lakho, ukuze iMolly fish ikhule kwaye iphile ngokufanelekileyo, kufuneka ibephakathi kwama-25 nama-28 degrees celcius.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Molly Intlanzi
Intlanzi emnyama yoKrebe